အစ္စတန်ဘူလ် RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
BBB ဥက္ကEk္ဌ Ekrem amomamoğluသည်လန်ဒန်ရှိသူ၏အဆက်အသွယ်များ၏နောက်ဆုံးနေ့တွင် 22 မတူညီသောငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ Imamoglu သည်သူတို့လုပ်လိုသောစီမံကိန်းများနှင့်ရည်မှန်းချက်များအကြောင်း Istanbul သို့ပြောဆိုခဲ့သည်၊ “ ခန့်မှန်းခြေစုစုပေါင်းဘတ်ဂျက် 10 ဘီလီယံ \_ t [ပို ... ]
BBB သမ္မတ Ekrem amomamoğluသည်အစည်းအဝေးတွင် 13 အပိုင်း၌“ ငလျင်” အကြောင်းအသေးစိတ်တင်ပြခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် 1999 Marmara မြေငလျင်ပြီးနောက်နိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် IMM ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု [ပို ... ]
İBB Başkanı İmamoğlu’nun sık sık gündeme getirdiği, “İSPARK’ta hiç kadın çalışan olmaması” sorunu yeni yönetimle birlikte nihayet çözüldü. İSPARK’ın ilk kadın çalışanları, Derya Atacan ve Zülfiya Işan işbaşı yaptı. Atacan, [ပို ... ]
မြေအောက်အလုပ်ရုံများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့်ပြည်တွင်းနည်းပညာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ယူပြီးမှမှ IMM ကသူ့ယူနစ် "ရထား" ။ အမျိုးမျိုးသောတက္ကသိုလ်များမှပညာရှင်များ၏ပါဝင်မှုကို "ရထား" နဲ့အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM) ရထားစနစ်ဦးစီးဌာန, [ပို ... ]
အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးမှပြောင်းရွှေ့ခံရဖို့ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဘူတာမှ Haydarpasa Haydarpasa နှင့် Sirkeci စာဖြင့်ရေးသားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်။ ဖော်ပြချက်; "Haydarpaşaနှင့် Sirkeci နှင့်အခွအေနေနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်ကွင်းဆင်းဘူတာ၏အခြေခံလူထုရည်ရွယ်ချက်နှင့်အညီအသုံးပြုသော [ပို ... ]
Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, bilime meraklı 15-24 yaş arasındaki 132 genci, TEKNOFEST’le buluşturdu. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’ndeki gerek deney düzenekleri gerekse atölye çalışmalarıyla 7’den [ပို ... ]
တူညီသော Marmaray မှာမက်ထရို Marmaray ကနေအကူးအပြောင်းအတွက်မြေအောက်ရထားလိုင်းကို၏ကျမ်းပိုဒ်၌ရှိသကဲ့သို့လည်းအစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM) ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğlu, "၏သင်တန်းငါသည်ဤတောင်းဆိုချက်များကို၏သောဝယ်လိုအားကိုညွှန်း, ခိုင်လုံသောလွှဲပြောင်းဖြစ်, ထက် [ပို ... ]
IMM İmamoğluသမ္မတ, "ဤမြို့သည် 24 နာရီနေထိုင်သော" ကအစ္စတန်ဘူလ် 24 အချိန်ခရီးသွား "ကာလ၌ '' အစ္စတန်ဘူလ်၏နေထိုင်သူများမှသတငျးကောငျးအပ်ပေးတော်မူ၏ဟုပြောဆိုလျက်, သြဂုတ်လ 30 ညဥ့်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေ့စတင်ခဲ့တယ်။ အဆိုပါထုတ်ဖော်အဆိုအရİmamoğlu; M1B, M1 မှ M2, M4, [ပို ... ]
IMM İmamoğluသမ္မတ, "ဤမြို့သည် 24 နာရီနေထိုင်သော" ကအစ္စတန်ဘူလ် 24 အချိန်ခရီးသွား "ကာလ၌ '' အစ္စတန်ဘူလ်၏နေထိုင်သူများမှသတငျးကောငျးအပ်ပေးတော်မူ၏ဟုပြောဆိုလျက်, သြဂုတ်လ 30 ညဥ့်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေ့စတင်ခဲ့တယ်။ ကမ်ဘာပျေါမှာသစ်ကိုလျှောက်လွှာအစ္စတန်ဘူလ်, တနင်္ဂနွေနှင့်အတူ [ပို ... ]